RASMI:Kooxda Liverpool Oo Si Rasmi Ah U Dhamaystirtay Heshiiska Xherdan Shaqiri Oo Ay Stoke City Kala Soo Wareegtay Iyo Lamarkii Emre Can Oo Loo Gacan Galiyay. – Laacib.net
RASMI:Kooxda Liverpool Oo Si Rasmi Ah U Dhamaystirtay Heshiiska Xherdan Shaqiri Oo Ay Stoke City Kala Soo Wareegtay Iyo Lamarkii Emre Can Oo Loo Gacan Galiyay.
Kooxda Liverpool ayaa hadda si rasmi ah ugu dhawaaqday in ay dhamaystirtay saxiixa kubbad sameeyihii kooxda Stoke City ee Xherdan Shaqiri. Maamulka Liverpool ayaa si wayn uga faa’iidaystay qodob ku jiray heshiiskii Xherdan Shaqiri ee kooxda Stoke City kadib markii ay heerka labaad u dhacday dhamaadkii xili ciyaareedkii hore waxayna Reds xidiga ree Switzerland u gacan galisay lamarkii uu Emre Can ka baxay.
Xherdan Shaqiri oo markii uu Bayern Munich ka tirsanaa si wayn u doonayay in uu Liverpool ku soo biiro ayaa ugu danbayn helay fursad uu riyadiisa Anfield ku gaadhi karo isla markaana uu Jurgen Klopp kula shaqayn karo.
War saxaafadeed ay Liverpool ku shaacisay heshiiska ay Xherdan Shaqiri kagala soo wareegtay kooxda Stoke City ayaa lagu yidhi: “Liverpool waxay dhamaystirtay saxiixa Xherdan Shaqiri oo ay Stoke City kala soo wareegtay. Xidiga heerka caalami ee Switzerland waxa kooxda qaliga ugu duugay qandaraas waqti dheer ah kadib markii uu jimihii dhamaystay tijaabada caafimaadka”.
Kadib markii uu saxiixay heshiiska waqtiga dheer ah ayuu Xherdan Shaqiri la hadlay shabakada rasmiga ah ee kooxdiisa cusub ee Liverpool wuxuuna yidhi: “Anigu aad ayaan ugu faraxsanahay in aan halka joogo. Waa koox wayn oo taariikh wayn leh, ciyaartoy waa wayn iyo tababare fantastik ah. Sidaa daraadeed, xaqiiqdii waxaan ku faraxsanahay in aan halkan joogo”.
Xherdan Shaqiri ayaa qirtay in ka ciyaartoy ahaan markasta ay jecel yihiin in ay kooxaha waa wayn ka ciyaaraan wuxuuna yidhi: “Ka ciyaartoy ahaan markasta waxaad doonaysaa in aad joogto heerka ugu wayn ee kubbada cagta. Dhawr sano ka hor waxaan sidoo kale doonayay in aan imaado laakiin may dhicin”.
Xherdan Shaqiri oo hadalkiisa sii wata ayaa yidhi: “Xaqiiqdii waxaan ku faraxsanahay in ugu danbayn aan halkan joogo. Waxaan doonayaa in aan sidoo kale naftayda horumar ku sameeyo, waxaan doonayaa in aan la joogo kuwa ugu fiican isla markaana waxaan doonayaa in aan koobab ku guulaysto, taasi waa sababta aan halkan u joogo”.
Si kastaba ha ahaatee, Liverpool ayaa Xherdan Shaqiri kula soo wareegtay 13.5 milyan gini wuxuuna xarunta tababarka ee Melwood kula kulmay xidigaha kooxdiisa cusub ee Liverpool gaar ahaan Naby Keita, Van Dijk iyo Wijnaldium wuxuuna qayb ka noqon doonaa qorshaha Klopp ee xili ciyaareedka cusub.
Jilaaga Caanka Ah Ee Will Smith Oo Daboolka Ka Qaaday Sababta Maraykanka Looga Daawan Waayey Koobka Adduunka Iyo Heesta Uu Ka Qaadi Doono Ciyaarta Finalka Ee France vs Croatia